के तपाईलाई यी देशका कानुनबारे थाहा छ ?-NepalKanoon.com
के तपाईलाई यी देशका कानुनबारे थाहा छ ?
कैयौँ देशमा अनौठा कानुन छन् । कति कानुन त सुन्दा पनि हाँसो लाग्ने खालका छन् । लाग्छ, कसरी तिनको पालना हुन्छ होला । त्यस्ता अनौठा कानुन निकै पुराना छन्, जुन आज पनि पालना भइरहेका छन् ।
पत्नीको जन्मदिन भुले जेल :
सामोआ देशमा पत्नीको जन्मदिन याद राख्नुपर्ने अनौठो कानुन छ । पत्नीको जन्मदिन भुल्नु अपराधको श्रेणीमा आउँछ । कुनै श्रीमानले पत्नीको जन्मदिन भुल्यो भने पहिलोचोटि चेतावनी दिइन्छ । तर, दोस्रोचोटि उक्त गल्ती दोहोरियो भने जरिवाना भर्ने मात्र होइन, जेल पनि जानुपर्ने हुन सक्छ ।
दश बजेपछि ‘नो फ्लस’ :
स्विस कानुनमा रातको १० बजेपछि ट्वाइलेटमा फ्लस चलाउन गैरकानुनी हुन्छ । राति फ्लस गर्दा ध्वनि प्रदूषण हुने र छिमेकीलाई असुविधा हुन सक्ने भएकोले यस्तो रोक लगाइएको कानुनमा उल्लेख छ ।
तर, कसैलाई राति १० बजेपछि दिसा गर्नुपर्‍यो भनेचाहिँ के होला ?
बल्ब फेर्न लाइसेन्स : अस्ट्रेलियामा बिजुलीको बल्बलगायत विद्युतीय सामग्री फेर्ने सम्बन्धमा रमाइलो कानुन छ । त्यहाँ बल्ब फेर्नेजस्तो सामान्य काम पनि लाइसेन्सप्राप्त इलेक्ट्रिसियनले मात्र गर्न पाउँछ । अरू कसैले हात लगायो भने जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
संसदमा मर्न नपाइने : बेलायतको तल्लो सदन हाउस अफ कमन्समा कुनै व्यक्तिलाई मर्ने अधिकार छैन । कुनै व्यक्ति असाध्यै बिरामी छ र ऊ बाँच्न सक्दैन भने उसलाई तुरुन्तै बाहिर लगिन्छ । संसद् भवन राजकीय स्थान भएको र कोही मर्‍यो भने राजकीय अन्त्येष्टि गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो प्रावधान राखिएको हो ।
फिलिपिन्समा ‘नो डिभोर्स’ : फिलिपिन्सको कानुनमा सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी कुनै कानुन छैन । बिहेपछि पतिपत्नी अलग–अलग रहन सक्छन्, तर सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी कुनै प्रावधान नै छैन । बिहेपछि जति नै समस्या भए पनि सम्बन्धविच्छेद असम्भव छ । भ्याटिकन सिटीमा पनि सम्बन्धविच्छेद सम्बन्धी कुनै व्यवस्था छैन ।